थाहा पाउनुहाेस्, के हो लेप्टोस्पाइरोसिस् ? - TV Annapurna
थाहा पाउनुहाेस्, के हो लेप्टोस्पाइरोसिस् ?
लेप्टोस्पाइरोसिस मुख्य गरी जनावरमा हुने संक्रमण हो, जुन उपयुक्त वातावरणीय अवस्थामा जनावरबाट मानिसमा सर्छ। यो संक्रमण विभिन्न सेरोटाइप्सका लेप्टोस्पाइरा ब्याक्टेरियाहरुले गराउँछन्। यो रोगले मध्यम प्रकारको ज्वरो आउनेदेखि, कलेजो र मिर्गौलासम्मलाई घातक असर गर्छ।
यो रोगबारे सर्वप्रथम सन् १९८६ मा एडल्फ वेल्सले वर्णन गरेकाले यसलाई वेल्स रोग पनि भनिन्छ। यो जनावरबाट मानिसमा सजिलै सर्ने रोग हो। उच्च तापक्रम भएका देश तथा डुवानका क्षेत्रहरुमा यो रोग प्रकोपका रुपमा देखा पर्छ।
नेपालमा सन् २०१० मा फैलिएको डेंगु सहितको मिश्रित रोगहरुको महामारीमा लेप्टोस्पाइरोसिस पनि देखिएको थियो। त्यसबेला ६५ जना बिरामीमा यो रोग प्रमाणित भएको थियो।
संक्रमित जनावरको पिसावबाट लामो समयसम्म यसका ब्याक्टेरिया निस्किरहन्छन्। मुसामा त यी ब्याक्टेरियाहरु जीवनभर पनि रहन सक्छन्। विश्वभर नै जंगली एवं घरपालुवा जनावरलाई यसका ब्याक्टेरियाले संक्रमित गरेको पाइन्छ। यो विशेषगरी मुसा तथा छुचुन्द्राहरुमा बढी पाइएको छ। धेरैजसो घरपालुवा जनावरहरु गाईभैँसी, भेँडा, बाख्रा, सुँगुर, घोडा आदिमा संक्रमित जनावरको पिसाबबाट यो रोग सर्छ। घरपालुवा जनावर कुकुरमा पनि यसको संक्रमण हुन सक्छ।
सरकारी ढिलासुस्तीले रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर यसपटक पनि बन्द
किन निलम्बित भएन आयल निगमका निर्देशक गोपाल खड्का ?